Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Valala an-karona | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: Valala an-karona
Resaky ny mpitsimpona akotry izy ity, izany hoe ny resaka mandeha ihany fa ny asa koa tsy maintsy vitaina ihany. “Rehefa tsy tiana ny alika dia lazaina fa voan’ny haromotana”, hoy ny ohabolam-bazaha iray. Marina amin’ny ampahany betsaka io raha mandinika ny zava-misy amin’ireo tsikera etsy sy eroa, ataon’ireo mpanohitra ny fitondrana. Samy tsaraina amin’ny ataony ny tsirairay, na mpitondra, na mpanohitra, na olon-tsotra satria ny asa vita no ifampitsarana. Ny azo antoka ihany koa dia izay manao zavatra ihany no tsy maintsy mahazo kiana. Atao ahoana tokoa moa ny hitsara olona tsy nanao na inona na inona ? Nefa efa endri-pitsarana ihany koa ny hoe manao ianao na nanao fa tsy nahavita na inona na inona akory.
Ny zava-misy ankehitriny mantsy dia toa ahitana taratra fa na inona na inona ataon’ny mpanatanteraka dia ahitan’ny mpanohitra tsininy hatrany. Fa olona iza moa no afaka hilaza fa tapitr’ohatra sy tsy misy kilema? Mandia tany ka tsy maintsy solafaka, miloloha lanitra ka tsy maintsy lena. Ny tian-ko lazaina dia tsotra, “na tsara fehy aza ny vatsy, misy foana ny anjaran’ny vorona”. Tsy izany anefa no zava-misy fa ny kiana no lasa aloha raha vao nanomboka ny asany ny fitondrana. Nandalovana koa ireny krizy ara-pahasalamana ireny. Teo ny fitantanana ny kere any Atsimo, ny fanarenana ny Rova, ny fanamboaran-dalana etsy sy eroa, ny lalaon’ny Barea. Tsy afa-bala amin’izany koa ny fitantanana ny raharaham-pirenena amin’ny ankapobeny. Raha ny filazan’ny sasany azy dia toy ny tsy misy “raha” mandeha sy tsy nisy zava-bita eto. Raha tsy hitanisa afa-tsy ireo zavatra vitsivitsy ireo, taiza ho aiza tokoa ireo mitonona ho mpanohitra tamin’ny fotoan’androny? Nanao ihany fa hay izay hampetimpety ny fandraharahana nataony no nanaovany zavatra. Raha izy no mihira dia voromanga fa raha ny hafa dia vorondolo.
Malalaka ny fanehoan-kevitra, izany rahateo no tinakin’ny demokrasia. Tokony hahatanty kiana ny mpitondra, fa izany no arofanina hialana amin’ny gaboraraka sy ny alasafay. Fa ilay kiana tokony ho amin’ny fijery miabo hanatsara zavatra fa tsy kiana bontolo. Tsy mety mantsy raha hifanipaka an-toerana toy ny valala an-karona eto. Fampandrosoana iraisana no tanjona.